नरैनापुर गाउँपालिकामा स्कूल बस सञ्चालन – Lokpati.com
अपराध मृत्यु सरकार प्रधानमन्त्री अमेरिका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड राशिफल पक्राउ नेपाल प्रहरी नेपाली काँग्रेस नेकपा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी प्रचण्ड केपी शर्मा ओली चितवन
By लाेकपाटी न्यूज	 On १० माघ २०७६, शुक्रबार १८:३६
बाँके, १० माघ । बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले जिल्लामै पहिलोपटक स्कूल बस सञ्चालनमा ल्याएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई विद्यालय ल्याउन लैजान स्कूल बस सञ्चालनमा ल्याइएको हो।
बाँके क्षेत्र नम्बर १ का संघीय सांसद् महेश्वरजंग गहतराज अथकले शुक्रबार वडा नम्बर १ कट्कुइँयामा स्कूल बसको उद्घाटन गरेका थिए। उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै सांसद् अथकले स्कूल बस सञ्चालनपछि सहज स्थितिको सुरुवात हुने बताए। उनले अभिभावकहरु अब आफ्ना बालबालिकालाई स्कूल पठाउने झन्झटबाट केहि मुक्त भएको बताए।
सांसद् अथकले आफ्ना बालबालिकालाई नियमितरुपमा विद्यालय पठाउन अभिभावकहरुलाई आग्रह गरे। नरैनापुरको शैक्षिक विकासका लागि आफू लागिरहेको भन्दै उनले गंगापुरको जय किसान माविलाई नमुना बिद्यालयको रुपमा विकास गरिने बताए।
उनले प्राविधिक धारको पढाई सुरु गर्ने प्रयास भइरहेको पनि जानकारी दिए। गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले शिक्षा समग्र विकासको अपरिहार्य आवश्यकता भएकाले गाउँपालिकाको शैक्षिक सुधारको लागि निरन्तर लागेको बताए।
विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बढाउन स्कूल बस सञ्चालन गरेको उनले बताए। शिक्षामा सुधार नगर्दासम्म नरैनापुर पछि परिरहने भन्दै शैक्षिक सुधारको लागि आफूलाई साथ दिन आग्रह गरे। गाउँपालिकाका प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत दल बहादुर बस्नेतले शिक्षा गाउँपालिकाको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताए।
बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका
विद्यालय शिक्षाः कुन तहमा कस्तो पाठ्यक्रम ?
शिक्षालाई प्रविधि र रोजगारीसँग जोडौं : मन्त्री पोख्रेल
प्रधानमन्त्रीज्यू ! आफ्नालाई छोड्नुभएन, आफैंलाई चाहिँ के…